सामग्री मार्केटिंग: अब सम्म तपाईंले सुन्नुहुने कुरालाई बिर्सनुहोस् र यस गाइडलाई पछ्याएर नेतृत्व निर्माण शुरू गर्नुहोस् Martech Zone
के तपाईलाई सीसा उत्पन्न गर्न गाह्रो भइरहेको छ? यदि तपाईंको उत्तर हो हो भने, त्यसोभए तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। Hubspot रिपोर्टअनुसार % 63% मार्केटरहरू भन्छन कि ट्राफिक र लिडाहरू उत्पन्न गर्नु उनीहरूको शीर्ष चुनौती हो.
तर तपाई सायद सोच्दै हुनुहुन्छ:
म कसरी आफ्नो व्यवसायको लागि सीसा उत्पन्न गर्न सक्छु?
ठिक छ, आज म तपाईंलाई कसरी देखाउँछु कि कसरी सामग्री मार्केटिंग तपाईंको व्यवसायको लागि सीसा उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्न।
सामग्री मार्केटिंग एक प्रभावी रणनीति हो जुन तपाईं तपाईंको व्यवसायको लागि सीसा उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। मार्केटोका अनुसार, बी २ बी कम्पनीहरूको%%% ले भनेका छन् कि सामग्री मार्केटिंगले परम्परागत मार्केटिंग रणनीतिहरूको भन्दा बढि नेतृत्व दिन्छ। यसकारण 85% 0f b2b मार्केटरहरू २०१ lead मा लीड जेनरेशन उनीहरूको सब भन्दा महत्वपूर्ण सामग्री मार्केटि goal लक्ष्य हो भन्नुहोस्।
यस गाईडमा, तपाईं सामग्री मार्केटिंग प्रयोग गरेर कसरी लिड्स उत्पन्न गर्ने भनेर जान्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ तपाइँको व्यवसायको लागि सीसा उत्पन्न गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तब तपाइँले यस गाईडलाई प्रेम गर्नुहुनेछ।
चरण १: सही लक्ष्य श्रोता छनौट गर्नुहोस्
राम्रो सामग्री रणनीतिमा तपाइँको सामग्री खपत गर्ने सही दर्शकहरूको छनौट समावेश गर्दछ। त्यसकारण, तपाईंले आफ्नो सामग्री सिर्जना गर्न सुरू गर्नु अघि, तपाईंलाई आफ्नो आदर्श ग्राहक चिन्नु आवश्यक छ। तपाईंसँग तिनीहरूको उमेर, स्थान, आय स्थिति, शैक्षिक पृष्ठभूमि, रोजगार शीर्षक, लि gender्ग, उनीहरूको पेन्ट पेंट्स, इत्यादिहरूको बारेमा विस्तृत ज्ञान हुनुपर्दछ। यी विवरणहरूले तपाईंलाई खरीददार व्यक्तित्व विकास गर्न सक्षम गर्दछ।
एक क्रेता व्यक्तित्व तपाईंको आदर्श ग्राहकको रुचि र व्यवहार प्रतिनिधित्व गर्दछ जब तिनीहरू तपाईंको व्यवसायसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्। एउटा उपकरण तपाईले आफ्नो क्रेता व्यक्तित्व सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ गुगल एनालिटिक्स वा एक्सटेन्सियो।
गुगल एनालिटिक्सबाट कसरी तपाईंको आदर्श ग्राहकको विवरणहरू प्राप्त गर्ने
तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा लग इन गर्नुहोस् र दर्शक ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। दर्शक ट्याब मुनिको डेमोग्राफिक हो (यसले तपाईंको श्रोताको उमेर र लि contains्ग समावेश गर्दछ), रुचि ट्याब, भू ट्याब, व्यवहार ट्याब, प्रविधि, मोबाइल, आदि।
तपाइँको दर्शक विशेषताहरू प्रदर्शन गर्न तिनीहरू प्रत्येकमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको दर्शकहरूको लागि ठूलो सामग्री उत्पादन गर्न तपाईले त्यहाँबाट प्राप्त डेटाको विश्लेषण गर्नुहोस्।
दोस्रो, तपाइँको खरीदको साथ तपाइँको खरीददार व्यक्तित्व सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ एक्सटेन्सियो। यो एक अनुप्रयोग हो जसले तपाईंलाई टेम्प्लेटहरूको सहायताको साथ सुन्दर खरीददार व्यक्तित्व सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंसँग तपाईंको ग्राहकको विवरण छैन भने, तपाईं यी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ द्रुत परामर्श समूहको इन्फोग्राफिक प्रश्नहरू।
माथिका प्रश्नहरूको उत्तरले तपाईंलाई तपाईंको दर्शकहरूको लागि उपयुक्त खरीददार व्यक्तित्व डिजाइन गर्न मद्दत गर्दछ।
एकचोटि तपाईंले बुझ्नुभयो कि तपाईंको दर्शक को हो, तपाईं तिनीहरूको लागि उपयोगी सामग्री सिर्जना गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण २: सहि सामग्री प्रकार फेला पार्नुहोस्
अब तपाईंसँग तपाईंको आदर्श ग्राहकको तस्वीर छ, यो तिनीहरूको लागि उपयुक्त सामग्री प्रकार फेला पार्ने समय हो। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सामग्री छन् जुन तपाईं आफ्नो दर्शकहरूको लागि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। तर नेतृत्व उत्पादनको उद्देश्यका लागि तपाईलाई आवाश्यक हुन्छ:
ब्लग पोस्ट: नेतृत्व उत्पादनका लागि ब्लग पोष्टहरू सिर्जना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंलाई उच्च-गुणवत्ताको ब्लग पोष्टहरू आवश्यक छन जसले तपाईंको श्रोतालाई शिक्षा र प्रेरणा दिन्छ। ब्लग पोष्टहरू नियमित आधारमा प्रकाशित गर्नुपर्दछ। यस अनुसार Hubspot, b2b कम्पनीहरू जुन प्रति महिना ११+ पटक ब्लग गर्थे उनीहरूले x गुणा बढी पायो ती भन्दा धेरै बढिहरू जुन प्रति महिना 4.5. times पटक ब्लग हुन्छ।
ई-पुस्तकहरू: ई-बुक लामो र ब्लग पोष्ट भन्दा गहिराइ हो। यसले तपाईंको लक्षित श्रोतालाई मूल्य थप गर्दछ र यो नेतृत्व उत्पादनको उद्देश्यका लागि उत्तम उपकरण हो। तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूले यसलाई तपाईंको ईमेल सूचीमा अप्ट इन गरे पछि डाउनलोड गर्न सक्दछन्।
भिडियो सामग्री: भिडियो बनाउनको लागि अधिक समय र पैसा चाहिन्छ। जे होस्, यो स engage्लग्नता उत्पन्न गर्दछ जब सफासँग गरिन्छ। लगभग % 50% इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू स्टोरमा जानु अघि उत्पादन वा सेवासँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्नुहोस्।
Infographics: इन्फोग्राफिक्स पहिले भन्दा बढी लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। यसले देखिने सम्बन्धी ढाँचामा प्रस्तुत संगठित डाटा समावेश गर्दछ। तपाईं यसलाई तपाईंको ब्लग पोष्टहरूमा थप्न सक्नुहुनेछ र सामाजिक मिडिया नेटवर्कमा साझा गर्न सक्नुहुनेछ।
मिनी कोर्स: तपाइँ आफ्नो प्रस्तावमा मिनी कोर्सहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको प्रस्तावहरूको बारेमा बढी जान्न तपाइँको दर्शकलाई थप शिक्षित गर्न। यो उही विषयहरूमा पोष्टको श्रृंखला वा भिडियोको श्रृंखला हुन सक्छ।
Webinars: Webinars नेतृत्व उत्पादन को उद्देश्य को लागी राम्रो हो। यो तपाइँको दर्शक मा विश्वास र विश्वसनीयता निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईका श्रोताहरूले तपाईसँग व्यापार गर्न सक्नु भन्दा पहिले यो चाहिन्छ।
अब जब तपाईंलाई सामग्रीको सही प्रकार थाहा छ जुन ट्राफिकले ड्राइभ गर्ने छ र तिनीहरूलाई तपाईंको व्यवसायको लागि अग्रणी बनाउँछ, त्यसपछिको अर्को कुरा भनेको सामग्री प्रमोट गर्नको लागि उपयुक्त च्यानल खोज्नु हो।
चरण:: सही च्यानल चयन गर्नुहोस् र तपाईंको सामग्री फैलाउनुहोस्
त्यहाँ विभिन्न प्रकारका च्यानल छन् जुन तपाईं तपाईंको सामग्री वितरण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू कि त नि: शुल्क वा भुक्तान गर्न सकिन्छ। नि: शुल्क च्यानल पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छैन किनकि तपाईंले आफ्नो समयको साथ तिर्नुहुनेछ। यसले सामग्री फैल्नको लागि धेरै समय लिन्छ र मूर्त नतीजा पनि हेर्नुहोस्। नि: शुल्क च्यानलहरूले सामाजिक मिडिया नेटवर्कहरू (फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिन्टेरेस्ट, जी +, इन्स्टाग्राम, आदि), फोरम मार्केटि,, अतिथि पोष्टि,, आदि समावेश गर्दछ।
सामाजिक मिडिया व्यवसाय को लागी एक प्रभावी च्यानल साबित भएको छ। विज्ञापन उमेरका अनुसार, उपभोक्ताहरू भन्छन् कि सामाजिक मिडिया टेलिभिजनले गर्ने निर्णयहरू खरीद गर्न लगभग ठूलो भूमिका खेल्छ।
तपाईंले सबै च्यानलहरू प्रयोग गर्नुपर्दैन, केवल एउटा उपयुक्त छनौट गर्नुहोस् जहाँ तपाईं लक्षित दर्शकहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं माथि परिभाषित गर्नुभयो।
सशुल्क च्यानलका लागि, तपाईंले विज्ञापनमा पैसा खर्च गर्नुपर्नेछ। नि: शुल्क च्यानलमा भुक्तान च्यानलका फाइदाहरू यो हुन् कि यो परिणामहरू छिटो हुन्छ र यसले समय बचत गर्दछ। तपाइँ सबै आवाश्यक विज्ञापन को लागी भुक्तान गर्नु पर्छ र तपाइँ ट्राफिक प्राप्त गर्न थाल्नुहुनेछ जुन लीडमा परिर्वतन हुन सक्छ। तपाईं सोशल मिडियामा विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ (ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, आदि), गुगल विज्ञापन, बिंग, आदि।
चरण:: तपाइँको नेतृत्व चुम्बक तयार गर्नुहोस्
एक नेतृत्व चुम्बक एक अप्रिय प्रस्ताव हो कि तपाईं आफ्नो भावी ग्राहकहरु को लागी तयार गरीएको छ। यो एक स्रोत हो जुन तपाईंको लक्षित दर्शकहरूले उनीहरूको समस्याहरू समाधान गर्नुपर्दछ। यसको मतलब यो मूल्यवान, उपयोगी, उच्च गुणस्तरको हुनुपर्दछ र तिनीहरूलाई पचाउनको लागि सजिलो हुनुपर्दछ।
तपाईंको नेतृत्व चुम्बक एक ई-बुक, सेतो कागज, डेमो, आदि हुन सक्छ। एक नेतृत्व चुम्बक को उद्देश्य तपाईंको दर्शकहरुलाई तपाईं बाट सिक्न सहयोग गर्नु हो। उनीहरू तपाइँको बारेमा जति धेरै जान्दछन्, अधिक तपाइँको ब्रान्डमा उनीहरूले विश्वास गर्नेछन्।
तपाईंलाई राम्रो अवतरण पृष्ठ आवश्यक छ जुन तपाईंको दर्शकलाई सदस्यता लिन प्रलोभित गर्दछ। राम्रो अवतरण पृष्ठले तपाइँलाई तपाइँको आगन्तुकहरूको ईमेल कब्जा गर्न सक्षम पार्नु पर्छ।
उदाहरणको रूपमा, यो लिड्सब्रिजको सबैभन्दा डाउनलोड गरिएको मध्ये एक हो सीसा मैग्नेट।
तपाईको नतीजा अधिकतम पार्ने एक तरीका भनेको तपाईको ल्यान्डि page पृष्ठ सफ्टवेयरलाई तपाईको सीआरएम वा इ-मेल सफ्टवेयरको साथ एकीकृत गर्नु हो, जस्तै मेलचिमप, अवेबर, इत्यादि ... तपाईको श्रोताले उनीहरूको इ-मेल ठेगाना प्रविष्ट गर्ने बित्तिकै, उपकरणले तपाईको सीआरएम वा ईमेल सफ्टवेयरमा सिधा स्टोर गर्दछ। ।
चरण:: उच्च गुणवत्ता ब्लग पोष्टहरू लेख्नुहोस्
सामग्री मार्केटिंगमा सामग्री नबिर्सनुहोस्। सामग्री मार्केटिंगको साथ नेतृत्व उत्पादनले सामग्रीको कारण काम गर्दछ। तपाइँलाई तपाइँको दर्शकहरूलाई अग्रसर गराउन लोभ्याउन अत्यधिक आकर्षक र गुणवत्ता ब्लग पोष्टहरू आवश्यक छ।
राम्रो ब्लग पोष्टमा क्लिक गर्न योग्य हेडलाईन हुनु पर्छ जसले तपाईंको दर्शकलाई क्लिक गर्न र पढ्न लोभ्याउँदछ। एक प्रतिलिपिबल्गर अनुसन्धान अध्ययनले यो कुरा पत्ता लगायो १० मध्ये 8 जनाले हेडलाईन कपी पढ्नेछन्, तर १० मध्ये २ जनाले मात्र बाँकी पढ्नेछन्। तपाइँलाई एक शीर्षक चाहिन्छ जुन तपाइँको आगंतुकलाई तपाइँको सामग्री क्लिक गर्न र पढ्न लोभ्याउँदछ।
दोस्रो, -300००--500०० ब्लग पोष्ट सिर्जना गर्ने युग सकिसक्यो। लामो-फारम सामग्री लिएको छ। तपाईको ब्लग पोष्ट लामो, मूल्यवान र शिक्षामूलक हुनुपर्दछ। तपाईंको दर्शकहरूले यसमा मान खोज्नुपर्दछ। तपाईं लामो-फारम सामग्री लेख्दै हुनुहुन्छ, तपाईं यसलाई फोटो, चार्ट र इन्फोग्राफिक्स थप्न सक्नुहुन्छ तपाईंको श्रोताको लागि पढ्न सजिलो बनाउनको लागि।
तपाईको ब्लगमा वा अन्य वेबसाईटहरूमा तपाईको पोष्टहरूमा सम्बन्धित ब्लग पोष्टमा लिंक गर्न सक्नुहुन्छ यसको गुणवत्ता बढाउनको लागि।
चरण:: तपाइँको श्रोताको साथ संलग्न हुनुहोस्
तपाइँको श्रोतालाई तपाइँको ब्ल्गमा फिर्ता आउनको लागि एक तरिका उनीहरूसँग संलग्न भएर। यसले तपाईंको ब्लगको वरिपरि बलियो समुदाय सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। जब तपाईंको दर्शकहरूले तपाईंको ब्लग पढ्छन् र तपाईं उनीहरूलाई सान्दर्भिक पोष्टहरू सँग पोषण गर्नुहुन्छ, तिनीहरू तपाईंको ब्लग पोष्टहरू र तपाईंको सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा टिप्पणीहरू छोड्नेछन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं तिनीहरूको सबै टिप्पणीहरूको जवाफ दिनुहुन्छ। तिनीहरूलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। तपाईंको ब्लगमा सम्पर्क पृष्ठ वा ईमेल ठेगाना थपेर पाठकहरूलाई तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सजिलो बनाउँदछ।
चरण:: तपाईंको दर्शकलाई पुन: निर्माण गर्नुहोस् र नेतृत्व गर्नुहोस्
सत्य यो हो कि, visits%% मानिसहरु जसले तपाईको वेबसाइट भ्रमण गर्दछन उनीहरु फर्किने छैनन। यसको मतलब तपाईको ब्यापारको लागि सीमित पीढी छैन। तपाईं retargeting प्रयोग गरेर यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको ब्लग रिडरहरु retarget गर्न को लागी तपाइँको वेबसाइट मा फिर्ता ल्याउन को लागी वा तपाइँ नेतृत्व मा रूपान्तरण गर्न को लागी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा पिक्सेल वा कोड राखेर यो गर्न सक्नुहुनेछ। जब कोही तपाईंको पृष्ठमा सामग्री पढ्न आउँदछ, तपाईं सजिलैसँग अन्य वेबसाइटहरू वा सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा विज्ञापनको साथ तिनीहरूलाई पुनःसर्च गर्न सक्नुहुनेछ।
उदाहरण को लागी, यदि कोही तपाइँको वेबसाइट को लागी तपाइँको सामग्री को लागी आउँछ तर सदस्यता वा तपाइँको नि: शुल्क चुम्बक चारा को लागी साइन अप छैन भने, तपाइँ वेब मार्फत यसलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले लगातार तपाइँको ब्रान्ड देख्नेछन् र यो तपाइँको प्रस्ताव को सम्झना दिलाउँछ। Retargeting धेरै प्रभावी छ। वेबसाइट आगन्तुकहरु जो संग retargeted छन् प्रदर्शन विज्ञापन percent० प्रतिशत हो रूपान्तरण गर्न बढी सम्भावना। यसकारण पाँच मध्ये एक मार्केटर अब retargeting को लागी एक समर्पित बजेट छ।
नेतृत्व उत्पादनका लागि सामग्री मार्केटिंगको प्रयोग एक प्रभावकारी विधि हो। तपाईलाई सबै गर्नु आवश्यक छ माथिको गाइड अनुसरण गर्नुहोस्।
के तपाईंले पहिले नेतृत्व उत्पादनको लागि सामग्री मार्केटिंग प्रयोग गर्न प्रयास गर्नु भएको छ?
Pss… यदि तपाईं नेतृत्व उत्पादनको विषयको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने हामीले भर्खरको तातो सूची सिर्जना गर्यौं १०१ सुझावहरू तपाईको नेतृत्व उत्पादनलाई बढावा दिन!
टैग: दर्शकहरु रिपोर्टिंगb2bb2b सामग्री मार्केटिंगब्लगिंगब्रान्ड वकालतब्रान्ड जागरूकतासामग्री मार्केटिङस्रोतब्रान्ड अधिवक्ताहरू सिर्जना गर्दैक्रस बेचग्राहक ईभान्जेलिज्मग्राहक वफादारीग्राहक प्रतिधारणई-पुस्तकहरुमंगनीGoogle विश्लेषणगुगल विश्लेषक दर्शक रिपोर्टिंगनेतृत्व पुस्तानेतृत्व पोषणलीडजेनलीड्सब्रिजमार्केटिंग इन्फोग्राफिक्समिनी-कोर्सबिक्री सक्षमतालक्षित स्रोताupsellभिडियो सामग्रीwebinarsxtensio
डिजाईन विजार्ड: मिनेटमा उच्च-गुणात्मक ग्राफिकल सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्